Kutyorwa kweKodzero Kunokwira Muna 2015
Zimbabwe Human Rights Commission - Elasto Mugwadi
Nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinonzi dzainge dzakawandisa gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore akapfuura.
Izvi zvakabuda mugwaro rakaburitswa mwedzi uno nemukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika muBritain iro rakazivisa kuti kutyorwa kwekodzero zvikuru sei nemapurisa nemasoja mugore ra2016 kwainge kwakawandisa.
Gwaro iri rinonzi: “Human Rights & Democracy –The 2016 Foreign and Commonwealth Office Report” rinoti nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuputswa kwedzimba dzevanhu, kurohwa nemapurisa, kupomerwa mhosva dzine chekuita nezvematongerwo enyika, kumbunyikidzwa kwekodzero dzekusangana nevamwe, kusungwa pasina mhosva pamwe nekuratidzira.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro weZimbabwe Human Rights Commission, VaElasto Mugwadi, avo vanoti havashamiswe nehuwandu hwemhosva dzakaitika gore rapera.
VaMugwadi vanoti vakatambirawo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzakawandisa dzinosvika mazana matanhatu nemakumi matanhatu nenhanhatu.
VaMugwadi vanoti hazvirevi kuti pakaita huwandu hwemhosva dzekutyorwa kwekodzero asi kuti vanhu vave kuziva kodzero dzavo pamwe nekwekuenda kana kodzero dzavo dzatyorwa kuburikidza nedzidziso iri kuitwa nekomisheni yavo.
VaMugwadi vanokurudzira vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vayambire nhengo dzavo kuti dzisaite mhirizhonga mukutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore rinouya kuti huwandu hudzikire.
Sachigaro weZimbabwe Peace Project uyezve vari mukuru weZimrights, VaOkay Machisa, vanoti vanobvumirana nechinhano chepasi chakaiswa Zimbabwe panyaya yekutyorwa kwekodzero.
VaMachisa vanoti zviri pachena kuti hurumende haishanduke nekuti nhoroondo yekutyora kodzero yakatanga makore awana nyika kuzvitonga.
VaMachisa vanoti vave kutyira kuti mhirizhonga ichakwira zvakanyanya gore rino nekuda kwesarudzo dzegore rinouya.
Izvi zvinotsigirwa naVaWliie Nyambe vanogara mumusha weveruzhinji weChitambo muChinhoyi. VaNyambe, avo vakambopazirwa imba yavo gore rapera, vanoti mapurisa hapana chavakaita kuti vabate vanhu vakatema imba yavo nokudaro vanoona mhirizhonga yakawanda kutanga gore rino.
Mumwe akambotemerwa imba nemudziyo ndiMuzvare Hilda Musendami vanogara mumusha weveruzhinji weHunyani. Muzvare Musendami vanoti vave kutyira hupenyu hwavo sezvo vanhu vakatema imba yavo nematombo vasina kubatwa kusvika parizvino.
Asi VaMugwadi vanoti hurumende inomboedza kutevedzera zvavanenge vataura. VaMugwadi vanopa muenzaniso wemhirizhonga yakaitika kudunhu reHurungwe pasarudzo dzakanga dziine mhirizhonga yakawanda idzo vanoti mapurisa akaferefeta nekubata vanhu vavainge vati vakakonzeresa mhirizhonga.
Munyori mubazi rezvemitemo, Amai Virginia Mabhiza, vanoti hurumende ichange yapedza kuyananisa mitemo yose pachapera hupenyu hweparamende iropo gore rinouya.